Nkwanye ike, ihe nkwụnye ọkụ, ihe nkwụnye ọkụ - Huyssen
Nkwanye ike DC nwere ike imeghari
Mpụta abụọ 120W 15V -15V Nkwanye Ike Ngwa
AC / DC 110V 4.5A 500W ọkụ ọkụ ọkụ
DC Programmable ike ọkọnọ 0-5000V 1A 5000W 5...
IP67 LED Driver 5V 80A 400W Waterproof Power Su ...
DC 52V 3A 150W na-enyefe ike na PFC ...
0-20V 30A 600W na-agbanwe ike ọkọnọ
0-200V 3A 600W na-agbanwe ike ọkọnọ ike
AC / DC 0-24V 20A 480W mgbanwe ike ịgbanwee ...
0-220V 2A 440W na-agbanwe ike ọkọnọ ike
Ngbanwe 0-12V 33A 400W CV CC ike ịgbanwee...
0/1-10v dimmable ọkwọ ụgbọ ala 32 ~ 40V 120W Waterproof ...
Ogige nkwakọba ihe 0-60V 200A 12KW na-agbanwe agbanwe
Emebere ngwaahịa anyị niile ka ha nwee ike iru ụkpụrụ nchekwa zuru ụwa ọnụ.
Lekwasị anya na R&D na nrụpụta na ụlọ ọrụ ọkọnọ ike maka afọ 15.
N'ịbụ onye guzosiri ike na 2011, Huyssen ike na-agba mbọ ịbụ onye na-eweta ngwọta ike ka mma. Ahịrị mmepụta anyị gụnyere ọkụ ọkụ AC-DC, ọkụ ọkụ DC dị elu, ihe nkwụnye ọkụ, chaja ngwa ngwa, ụdị 1000+ zuru oke.
Ọkụ ọkụ LED
Akụrụngwa ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi
1. Anyị nwere ahịrị ngwaahịa ngwaahịa ike zuru oke, site na 5 watts nke nkwụnye ọkụ ruo 100,000 watts nke ike mmemme.
2. Nkọwa zuru oke, otu R & D siri ike, na-akwado nhazi pụrụ iche. Anyị na-enye gị ngwọta ike nwere ike ime.
3. Nzaghachi ngwa ngwa nye ndị ahịa, ịgba akaebe na oge, nnyefe ngwa ngwa.
Nnukwu voltaji mmemme ike ọkọnọ
Huyssen ike bụ onye na-eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke High Voltage Programmable DC Power Supplies. Anyị nwere usoro nke DC programmable ike ọkọnọ nke dabara adabara nke ọma na nke ziri ezi na-aga n'ihu ...
Iji dozie nrụgide ọrụ, mepụta agụụ, ọrụ, na ọnọdụ arụ ọrụ obi ụtọ, mee ka ndụ ọdịnala na-amu amu ndị ọrụ, melite ọdịmma ụlọ ọrụ, na ịbawanye nkwurịta okwu ...
Ọkụ ọkụ Huyssen Power dị oke mkpa
Huyssen Power's ultra-thinth waterproof power on mmiri ewepụtala usoro 800W ọhụrụ. The LED ultra-thin waterproof ọkọnọ ike, n'ihi na aha na-egosi, bụ ultra-mkpa na thinner, nke nwere ike ada ...
Huyssen's waterproof power on your high PFC
Huyssen's PFC ọkụ anaghị egbochi mmiri gụnyere ike sitere na 150 Watt ruo 600W. Voltage mmepụta nwere ike ịbụ 5V,12V,24V,30V,36V,48V, wdg. A na-akwakọba ya na nke siri ike, enweghị mmiri, enweghị uzuzu, anwụ nkedo al..
Nweta ike ahaziri ahazi, Ntinye ike mmemme, Nkwanye ike Dc, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ, Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip,